မူကြိုဆရာမတစ်ဦး၏ ဘဝထဲက တစ်နေ့တာ - For her Myanmar
မူကြိုဆရာမတစ်ဦး၏ ဘဝထဲက တစ်နေ့တာ
ယောင်းက ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ဖို့အတွက် စိတ်ဝင်စားပါသလား?
ဝိုင်းရဲ့ “ဘဝထဲကတစ်နေ့တာ” ဆိုတာ မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းက ထူးချွန်တဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ တစ်နေ့တာတွေကို အက်ဒ်မင်တို့ကတစ်ဆင့် ယောင်းတို့ကို တင်ဆက်ပေးနေတာ အတော်လည်း ကြာခဲ့ပါပြီနော်။ ဆိုတော့ ဘယ်လို အလုပ်အကိုင်ရာထူးမဆို ယောင်းတို့ အင်တာဗျူးဖြေဖို့အတွက် လွယ်ကူနေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာကတော့ Ma Ada Chai (Thalun international school ရှိ မူကြိုကျောင်းဆရာမဟောင်းတစ်ဦး) ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် မူလတန်းကျောင်းသွားခြင်းဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် သူတို့ရဲ့မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ အချိန်အကြာကြီး ခွဲခွာရခြင်းပါ။ မူကြိုဆရာမတယောက်ဆိုတာ ကလေးနဲ့ မိဘတွေကြားက ပြောင်းလဲမှုအသစ်တွေနဲ့ မျက်ရည်တွေ ပြည့်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူပါ။
တစ်နေ့တာဟာ အချိန်စက်ဝိုင်းအတိုင်း စတင်ပြီး နေ့စဉ် ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ကလေးတွေရဲ့ ကျောင်းအတွက် ပြင်ဆင်ပြီး အတန်းစတင်ပါပြီ။ ကျွန်မတို့က ABC နဲ့123 စတဲ့ အသေးစိတ် အခြေခံများကို စတင်သင်ပေးပြီး ကလေးတွေရဲ့ အခန်းတွင်းမှာ အမျိုးမျိုးသော သံစဉ်သီချင်း၊ အရောင်များနှင့်ပတ်သက်တဲ့၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ ရက်သတ္တပတ်တွင်ပါသော နေ့တွေ၊ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အရာတွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေ စသည့်အကြောင်းများကို သင်ကြားပေးပါသည်။
ဒီအချိန်တွေ ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဦးနှောက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် စွမ်းအင်တွေအများကြီး လိုအပ်တာကြောင့် အဆာပြေစားဖို့ အချိန်ထားပေးရပါတယ်။ ကလေးတွေကို သီချင်းတွေနဲ့ စသင်ကြားပေးပြီး ကလေးတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းလိုက်ပါ သီဆိုလှုပ်ရှားလာပါတယ်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထယူစားရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ ကလေးတွေက လက်တွေဆေးကြောလို့ စားသောက်ဖို့အတွက် စနတစ်တကျ စောင့်ဆိုင်းရပါတယ်။
စားပြီးတဲ့အခါမှာ ကလေးတွေက ကျောင်းဝင်းအလယ်မှာ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု ပြုလုပ်မယ့် အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ ဒီနေ့မှာတော့ “အရာဝတ္တုတွေထဲက ဘယ်အရာဝတ္တုက ပေါလောပေါ်သလဲ ဒါမှမဟုတ် မြှုပ်သလဲ” ဆိုတာကို လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ စတင်ပါမယ်။
Related Article >>> ဝယ်ယူရေး မန်နေဂျာတစ်ဦးရဲ့ တစ်နေ့တာဘဝ
ကလေးများထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်မက စားပွဲပေါ်က ကျောက်ခဲတစ်ခုကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး “ဒါကိုကြည့်ပါဦး ၊ ဒါကဘာလဲဆိုတာသိသလား?” လို့မေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးတွေက တစ်ပြိုင်တည်းပဲ “ဟုတ်၊ အဲ့ဒါကကျောက်တုံး!”လို့ဖြေတာပေါ့…
ကျွန်မက ထပ်မေးလိုက်တယ်။ “ဒီဟာတွေကိုစမ်းကြည့်ချင်လား” “အကြီးတခုလား၊ အသေးတစ်ခုလား?” “ဘယ်အရောင်လဲ?”။ “အဲဒါက လေးလား? ပေါ့လား?” “အကယ်၍ ဒီကျောက်တုံးကို ရေထဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြှုပ်သွားမှာလား ဒါမှမဟုတ် ပေါလောပေါ်နေမလား?” စတဲ့ သူတို့ရဲ့ သိချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြည့်ပါတယ်။
ကလေးတွေကလည်း သူတို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာ ပြန်ပြောပြပြီးတဲ့အခါ ကျောက်ခဲကို ရေထဲညင်ညင်သာသာထည့်ပြီး စမ်းသပ်မှုလုပ်တာကို ထိုင်ခုံကနေ ထလို့ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ကြပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားတော့ “မြှုပ်သည်” ဆိုပြီး စာတမ်းတပ်လို့ အဲဒီအရာဝတ္တုကို ခြင်းထဲထည့်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကိုတော့ ကလေးတွေက သူတို့အတန်းဖော်တွေနဲ့ ဆက်ပြီး စမ်းသပ်ကြပါတော့တယ်။ ဒါဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေး တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ကလေးတွေကို အခြေခံသိပ္ပံသဘောတရားကို နားလည်စူးစမ်းတတ်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ပျော်စရာ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုလေးပေါ့..
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဂီတအဆောက်အဦးသို့ ရှေ့ဆက်သွားပါတယ်။ ရောက်တာနဲ့ ကျွန်မတို့အားလုံး စက်ဝိုင်းပုံစံအတိုင်း နေရာယူပြီး ကလေးတွေရဲ့ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး CD က ကလေးသီချင်းကို ဖွင့်ပေးပါတယ်။ “Sammy” က “Susan” ကို မတွန်းခင်ထိတော့ အားလုံးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကနေကြတာပါပဲ။ ဒီနောက်မှာတော့ “Sammy” ထံ မှစူးရှသောအော်သံထွက်ပေါ်လာပြီး “Susan” စငိုပါတော့တယ်။ “Susan” လေးအဆင်ပြေလား စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာ “Sammy” ကို ခေါ်လိုက်တော့ အခြား သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကလည်း ဘာဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ အာရုံစိုက်လာကြပြီလေ…
ဒီလို မတော်တဆဖြစ်ရပ် တစ်ခုကနေ ကလေးတွေအတွက် သင်ယူစရာသင်ခန်းစာတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ “Social-emotional skill” ကို တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ လေ့လာဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရသွားပြီလေ.. ကလေးတယောက်က လဲကျသွားတဲ့ “Susan” ကို ကျောပုတ်ပြီးနှစ်သိမ့်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်နေတာက ချီးမွမ်းစရာပါ။ကလေးတွေက သူတို့သူငယ်ချင်းအပေါ် ကြင်နာတာက ကြည်နူးစရာပဲ မဟုတ်လား…
Related Article >>> ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာ
ကျွန်မ “Sammy” ဘက်လှည့်ပြီး “Susan” ကို နာအောင်လုပ်မိလား” လို့ မေးတဲ့အခါ သူကတော့ မျက်လုံးချင်းမဆုံဘဲ ခေါင်းညိတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မ သူ့ကို “Susan” ရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ခိုင်းပြီး “သူ ဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့ထင်လဲ၊ ပျော်နေလား ၊ ဝမ်းနည်းနေမလား”လို့ မေးတဲ့အခါ “ဝမ်းနည်းနေတာ” လို့သူကပြန်ဖြေတယ် ။ “မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်က မင်းကိုဒီလိုတွန်းမယ်ဆို မင်းကြိုက်ပါ့မလား ခု “Susan” ကိုတောင်းပန်ပြီး ဖက်လိုက်ပါ” လို့ ကျွန်မပြောလိုက်ပါတယ်။ “Susan” က “Sammy” တောင်းပန်တာ လက်ခံပြီးသူငယ်ချင်းကောင်းအဖြစ် ဆက်လက်နေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြတဲ့အခါ ဒရမ်တွေပုတ်လို့ maracas လှုပ်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ကကြပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ နေ့လယ်စာမတိုင်ခင် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ အတန်းထဲထိုင်စေပြီး ပုံပြင်ပြောဖို့ အချိန်ကျလာပါတော့တယ်။ သူတို့ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပြပြီး သူတို့ရဲ့ အသံတိုးပြီး ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ခိုင်းထားပြီးတဲ့နောက် သူတို့အကြိုက်ဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ “A Little IIama” ကို ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ခုက နေ့လည်စာစားချိန်ကျရောက်ပါပြီ။ ကလေးတွေကို သူတို့ဘာသာ စားသောက်ဖို့အတွက် တွန်းအားပေးနေရပါပြီ။ ဒါမှပဲ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းရည် နဲ့ အမှီအခိုကင်းတဲ့ စရိုက်လေးတွေ တိုးတက်ပေါ်ထွက်လာမှာပေါ့… နေ့လယ်စာစားချိန်ဟာ ဆရာမတွေရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံနိုင်မှုကို စမ်းသပ်တဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးတွေက အစာတွေကို နည်းနည်းစီပဲ စားပြီး ဆရာမတွေ မမြင်တဲ့အချိန်မှာ လျှောက်ပြီး လှည့်ပတ်သွားနေတော့တာကိုး.. တက်ကြွလှုပ်ရှားရမယ့် မနက်အချိန်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း အိပ်ငိုက်နေတဲ့ ကလေးတွေကလည်း ဒုက္ခတစ်မျိုး ပေးနိုင်တာပါပဲ။
ကလေးတွေကတော့ နေ့လယ်စာ စားပြီးတဲ့နောက် လက်ဆေးပြီး မျက်လုံးတွေ စင်းလာပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်ကတော့ သားချော့တေးနဲ့ သူတို့ကို အိပ်စက်စေရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ ကလေးတွေက အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ တကယ်ကို အပြစ်ကင်းတဲ့ နတ်သူငယ်လေးတွေလိုလို… သူတို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကျွန်မ မှတ်တမ်းရေးရပါတယ်။ အလုပ်လည်း အပြီး သူတို့လည်း အနိုး ကွက်တိပဲပေါ့.. နိုးလာတဲ့ ကလေးတွေက အဆာပြေ နည်းနည်းစားပြီး အတန်းဖော်တွေနဲ့ ကစားနေပါတော့တယ်။ တစ်နေ့လုံး ကစားလိုက်၊ မုန့်စားလိုက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မိဘတွေ လာကြိုတဲ့အချိန်မှာတော့ အပြုံးပန်းတွေ ဝေရင်း အိမ်ပြန်သွားပါတော့တယ်။
ကလေးတွေအားလုံးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မနက်ဖြန်အတွက် ပစ္စည်းတွေကို နေရာတကျ ပြန်စီစဉ်ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်ပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ပေါ့။ တစ်နေ့တာဟာ ပင်ပန်းပေမဲ့ နောက်ရက်တွေအတွက်ကိုလည်း ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မူကြိုကျောင်းမှာ ရှိနေသမျှ ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ ငြီးငွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ…
ယောငျးက ပညာရေးနယျပယျမှာ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးလုပျဖို့အတှကျ စိတျဝငျစားပါသလား?
ဝိုငျးရဲ့ “ဘဝထဲကတဈနတေ့ာ” ဆိုတာ မွနျမာပွညျတဈဝှမျးက ထူးခြှနျတဲ့ ပညာရှငျတှရေဲ့ တဈနတေ့ာတှကေို အကျဒျမငျတို့ကတဈဆငျ့ ယောငျးတို့ကို တငျဆကျပေးနတော အတျောလညျး ကွာခဲ့ပါပွီနျော။ ဆိုတော့ ဘယျလို အလုပျအကိုငျရာထူးမဆို ယောငျးတို့ အငျတာဗြူးဖွဖေို့အတှကျ လှယျကူနလေောကျပွီ ထငျပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာကတော့ Ma Ada Chai (Thalun international school ရှိ မူကွိုကြောငျးဆရာမဟောငျးတဈဦး) ရဲ့ အကွောငျးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
ကလေးတှအေတှကျ မူလတနျးကြောငျးသှားခွငျးဟာ ပထမဆုံးအကွိမျ သူတို့ရဲ့မိဘ၊ အုပျထိနျးသူတှနေဲ့ အခြိနျအကွာကွီး ခှဲခှာရခွငျးပါ။ မူကွိုဆရာမတယောကျဆိုတာ ကလေးနဲ့ မိဘတှကွေားက ပွောငျးလဲမှုအသဈတှနေဲ့ မကျြရညျတှေ ပွညျ့နတေဲ့ အခွအေနတှေကေို အဆငျပွအေောငျ ဆောငျရှကျပေးတဲ့သူပါ။
တဈနတေ့ာဟာ အခြိနျစကျဝိုငျးအတိုငျး စတငျပွီး နစေ့ဉျ ပုံမှနျလုပျထုံးလုပျနညျးအရ ကလေးတှရေဲ့ ကြောငျးအတှကျ ပွငျဆငျပွီး အတနျးစတငျပါပွီ။ ကြှနျမတို့က ABC နဲ့123 စတဲ့ အသေးစိတျ အခွခေံမြားကို စတငျသငျပေးပွီး ကလေးတှရေဲ့ အခနျးတှငျးမှာ အမြိုးမြိုးသော သံစဉျသီခငျြး၊ အရောငျမြားနှငျ့ပတျသကျတဲ့၊ ပုံသဏ်ဍာနျ၊ ရကျသတ်တပတျတှငျပါသော နတှေ့ေ၊ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှနေဲ့ ဆိုငျတဲ့ အရာတှေ၊ တိရိစ်ဆာနျတှေ စသညျ့အကွောငျးမြားကို သငျကွားပေးပါသညျ။
ဒီအခြိနျတှေ ပွီးတဲ့နောကျမှာ ဦးနှောကျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးဖို့အတှကျ စှမျးအငျတှအေမြားကွီး လိုအပျတာကွောငျ့ အဆာပွစေားဖို့ အခြိနျထားပေးရပါတယျ။ ကလေးတှကေို သီခငျြးတှနေဲ့ စသငျကွားပေးပွီး ကလေးတှကေလညျး တဖွညျးဖွညျးလိုကျပါ သီဆိုလှုပျရှားလာပါတယျ။ ကိုယျထူကိုယျထယူစားရတဲ့ စားသောကျဆိုငျမှာ ကလေးတှကေ လကျတှဆေေးကွောလို့ စားသောကျဖို့အတှကျ စနတဈတကြ စောငျ့ဆိုငျးရပါတယျ။
စားပွီးတဲ့အခါမှာ ကလေးတှကေ ကြောငျးဝငျးအလယျမှာ လှုပျရှားမှု တဈခု ပွုလုပျမယျ့ အခြိနျရောကျလာပါပွီ။ ဒီနမှေ့ာတော့ “အရာဝတ်တုတှထေဲက ဘယျအရာဝတ်တုက ပေါလောပျေါသလဲ ဒါမှမဟုတျ မွှုပျသလဲ” ဆိုတာကို လလေ့ာစမျးသပျမှုတှနေဲ့ စတငျပါမယျ။
Related Article >>> ဝယျယူရေး မနျနဂြောတဈဦးရဲ့ တဈနတေ့ာဘဝ
ကလေးမြားထိုငျနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ ကြှနျမက စားပှဲပျေါက ကြောကျခဲတဈခုကို ကောကျယူလိုကျပွီး “ဒါကိုကွညျ့ပါဦး ၊ ဒါကဘာလဲဆိုတာသိသလား?” လို့မေးလိုကျပါတယျ။ ကလေးတှကေ တဈပွိုငျတညျးပဲ “ဟုတျ၊ အဲ့ဒါကကြောကျတုံး!”လို့ဖွတောပေါ့…
ကြှနျမက ထပျမေးလိုကျတယျ။ “ဒီဟာတှကေိုစမျးကွညျ့ခငျြလား” “အကွီးတခုလား၊ အသေးတဈခုလား?” “ဘယျအရောငျလဲ?”။ “အဲဒါက လေးလား? ပေါ့လား?” “အကယျ၍ ဒီကြောကျတုံးကို ရထေဲထညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ မွှုပျသှားမှာလား ဒါမှမဟုတျ ပေါလောပျေါနမေလား?” စတဲ့ သူတို့ရဲ့ သိခငျြစိတျကို လှုံ့ဆျောပေးမယျ့ မေးခှနျးလေးတှေ မေးကွညျ့ပါတယျ။
ကလေးတှကေလညျး သူတို့ဘယျလိုထငျလဲဆိုတာ ပွနျပွောပွပွီးတဲ့အခါ ကြောကျခဲကို ရထေဲညငျညငျသာသာထညျ့ပွီး စမျးသပျမှုလုပျတာကို ထိုငျခုံကနေ ထလို့ စိတျဝငျတစား ကွညျ့ကွပါတယျ။ အားလုံးပွီးသှားတော့ “မွှုပျသညျ” ဆိုပွီး စာတမျးတပျလို့ အဲဒီအရာဝတ်တုကို ခွငျးထဲထညျ့ပွလိုကျပါတယျ။ ကနျြတဲ့ အရာဝတ်ထုတှကေိုတော့ ကလေးတှကေ သူတို့အတနျးဖျောတှနေဲ့ ဆကျပွီး စမျးသပျကွပါတော့တယျ။ ဒါဟာ ရိုးရှငျးတဲ့ လှုပျရှားမှုလေး တဈခုဖွဈပွီးတော့ ကလေးတှကေို အခွခေံသိပ်ပံသဘောတရားကို နားလညျစူးစမျးတတျဖို့ ကူညီပေးနိုငျတဲ့ ပြျောစရာ လကျတှစေ့မျးသပျမှုလေးပေါ့..
ပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ဂီတအဆောကျအဦးသို့ ရှဆေ့ကျသှားပါတယျ။ ရောကျတာနဲ့ ကြှနျမတို့အားလုံး စကျဝိုငျးပုံစံအတိုငျး နရောယူပွီး ကလေးတှရေဲ့ အကွိုကျနှဈသကျဆုံး CD က ကလေးသီခငျြးကို ဖှငျ့ပေးပါတယျ။ “Sammy” က “Susan” ကို မတှနျးခငျထိတော့ အားလုံးက ပြျောပြျောရှငျရှငျ ကနကွေတာပါပဲ။ ဒီနောကျမှာတော့ “Sammy” ထံ မှစူးရှသောအျောသံထှကျပျေါလာပွီး “Susan” စငိုပါတော့တယျ။ “Susan” လေးအဆငျပွလေား စဈဆေးပွီးတဲ့နောကျမှာ “Sammy” ကို ချေါလိုကျတော့ အခွား သူငယျခငျြးတှအေားလုံးကလညျး ဘာဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာ အာရုံစိုကျလာကွပွီလေ…
ဒီလို မတျောတဆဖွဈရပျ တဈခုကနေ ကလေးတှအေတှကျ သငျယူစရာသငျခနျးစာတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ “Social-emotional skill” ကို တိုးတကျအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာ လလေ့ာဖို့ အခှငျ့အရေးတှေ ရသှားပွီလေ.. ကလေးတယောကျက လဲကသြှားတဲ့ “Susan” ကို ကြောပုတျပွီးနှဈသိမျ့ပွီး နှဈသိမျ့ပေးတဲ့ အကွညျ့နဲ့ ကွညျ့နတောက ခြီးမှမျးစရာပါ။ကလေးတှကေ သူတို့သူငယျခငျြးအပျေါ ကွငျနာတာက ကွညျနူးစရာပဲ မဟုတျလား…
Related Article >>> ထုတျကုနျပစ်စညျး ဒီဇိုငျနာတဈယောကျရဲ့ တဈနတေ့ာ
ကြှနျမ “Sammy” ဘကျလှညျ့ပွီး “Susan” ကို နာအောငျလုပျမိလား” လို့ မေးတဲ့အခါ သူကတော့ မကျြလုံးခငျြးမဆုံဘဲ ခေါငျးညိတျပွခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျမ သူ့ကို “Susan” ရဲ့ မကျြရညျတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့ မကျြနှာကို ကွညျ့ခိုငျးပွီး “သူ ဘယျလိုခံစားရမလဲလို့ထငျလဲ၊ ပြျောနလေား ၊ ဝမျးနညျးနမေလား”လို့ မေးတဲ့အခါ “ဝမျးနညျးနတော” လို့သူကပွနျဖွတေယျ ။ “မငျးရဲ့သူငယျခငျြးတယောကျက မငျးကိုဒီလိုတှနျးမယျဆို မငျးကွိုကျပါ့မလား ခု “Susan” ကိုတောငျးပနျပွီး ဖကျလိုကျပါ” လို့ ကြှနျမပွောလိုကျပါတယျ။ “Susan” က “Sammy” တောငျးပနျတာ လကျခံပွီးသူငယျခငျြးကောငျးအဖွဈ ဆကျလကျနမေယျလို့ဆိုပါတယျ။ မိနဈအနညျးငယျကွတဲ့အခါ ဒရမျတှပေုတျလို့ maracas လှုပျပွီး ပြျောပြျောရှငျရှငျ နောကျတဈကွိမျ ပွနျကကွပါတယျ။
အဲဒီနောကျမှာတော့ နလေ့ယျစာမတိုငျခငျ တိတျတိတျဆိတျဆိတျနဲ့ အတနျးထဲထိုငျစပွေီး ပုံပွငျပွောဖို့ အခြိနျကလြာပါတော့တယျ။ သူတို့ဖတျခငျြတဲ့ စာအုပျတှကေို ဖတျပွပွီး သူတို့ရဲ့ အသံတိုးပွီး ငွိမျငွိမျထိုငျခိုငျးထားပွီးတဲ့နောကျ သူတို့အကွိုကျဆုံး စာအုပျတဈအုပျဖွဈတဲ့ “A Little IIama” ကို ဖတျပွခဲ့ပါတယျ။
ခုက နလေ့ညျစာစားခြိနျကရြောကျပါပွီ။ ကလေးတှကေို သူတို့ဘာသာ စားသောကျဖို့အတှကျ တှနျးအားပေးနရေပါပွီ။ ဒါမှပဲ သူတို့ရဲ့ လှုပျရှားနိုငျမှုစှမျးရညျ နဲ့ အမှီအခိုကငျးတဲ့ စရိုကျလေးတှေ တိုးတကျပျေါထှကျလာမှာပေါ့… နလေ့ယျစာစားခြိနျဟာ ဆရာမတှရေဲ့ စိတျရှညျသညျးခံနိုငျမှုကို စမျးသပျတဲ့ အခြိနျပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးတှကေ အစာတှကေို နညျးနညျးစီပဲ စားပွီး ဆရာမတှေ မမွငျတဲ့အခြိနျမှာ လြှောကျပွီး လှညျ့ပတျသှားနတေော့တာကိုး.. တကျကွှလှုပျရှားရမယျ့ မနကျအခြိနျမှာ ထူးထူးဆနျးဆနျး အိပျငိုကျနတေဲ့ ကလေးတှကေလညျး ဒုက်ခတဈမြိုး ပေးနိုငျတာပါပဲ။
ကလေးတှကေတော့ နလေ့ယျစာ စားပွီးတဲ့နောကျ လကျဆေးပွီး မကျြလုံးတှေ စငျးလာပါတော့တယျ။ ဒီအခြိနျကတော့သားခြော့တေးနဲ့ သူတို့ကို အိပျစကျစရေမယျ့ အခြိနျပါပဲ။ ကလေးတှကေ အိပျနတေဲ့အခြိနျမှာ တကယျကို အပွဈကငျးတဲ့ နတျသူငယျလေးတှလေိုလို… သူတို့အိပျနတေဲ့အခြိနျမှာပဲ တဈယောကျခငျြးစီရဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှနေဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှကေို ကြှနျမ မှတျတမျးရေးရပါတယျ။ အလုပျလညျး အပွီး သူတို့လညျး အနိုး ကှကျတိပဲပေါ့.. နိုးလာတဲ့ ကလေးတှကေ အဆာပွေ နညျးနညျးစားပွီး အတနျးဖျောတှနေဲ့ ကစားနပေါတော့တယျ။ တဈနလေုံ့း ကစားလိုကျ၊ မုနျ့စားလိုကျနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိဘတှေ လာကွိုတဲ့အခြိနျမှာတော့ အပွုံးပနျးတှေ ဝရေငျး အိမျပွနျသှားပါတော့တယျ။
ကလေးတှအေားလုံးထှကျသှားပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ မနကျဖွနျအတှကျ ပစ်စညျးတှကေို နရောတကြ ပွနျစီစဉျရပါတယျ။ ကိုယျတိုငျလညျး အိမျပွနျဖို့ အဆငျသငျ့ပေါ့။ တဈနတေ့ာဟာ ပငျပနျးပမေဲ့ နောကျရကျတှအေတှကျကိုလညျး ရငျခုနျပြျောရှငျရတဲ့ အလုပျတဈခုပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မူကွိုကြောငျးမှာ ရှိနသေမြှ ကြှနျမ ဘယျတော့မှ ငွီးငှနေို့ငျမှာ မဟုတျဘူးလေ…
Are you interested inacareer in education? Wynee’s “A Day in the Life” series providesaglimpse into the daily lives of real Myanmar-based professionals so that you can be better prepared for interviews and life on the job. Wynee provides belowaday in the life of Ma Ada Chai,aformer preschool teacher at Thalun International School in Yangon.
Going to preschool is the first time that children spend an extended amount of time away from their parents and caretakers. A preschool teacher guides children and parents through this new and tear-filled transition.
The day starts with circle time,adaily routine that prepares children for the school day and signals the beginning of class. We go over the basics, such as their ABCs and 123s andavariety of nursery rhymes about songs about colors, shapes, days of the week, body parts, and of course, the all time favorite, animals!
After circle time, it’s time forasnack break – growing bodies and brains need lots of energy! We start our purple train song and the children fall into line, ready to chug along . At the cafeteria, the children wash their hands and sit down at the table with their classmates for some nibbles.
It’s now time for an activity at one of the many centers around campus. Today, we head to the discovery center to test whether objects will float or sink. When the children have been seated, I pick up one object from the table filled with random items–arock. “Wow! Look at this! Does anyone know what this is? Yes, it isarock! Here, do you want to feel it? Big or small? What color is it? Is it heavy or light? Hmm, I wonder… If I put this rock in the water, will it float and stay above the water or will it sink and drop to the bottom of the tub?” The children shout out what they think and watch as I demonstrate how to gently put the object into the water. The children jump out of their seats to peer into the tub to see that the rock has indeed sunk. I fish it out and place it inabasket that is labeled “sink” and let the children test it out the remaining items with their classmates. It isasimple activity andafun tactile experience that helps them explore basic science concepts.
Onwards we go the music center! We get intoalarge circle and turn on the children’s favorite music CD with classic children’s songs. Everyone is dancing along happily … until Sammy pushes Susan and now she isawailing banshee. After checking that Susan is okay, I bring Sammy over. The loud crying has caught the attention of the other children who are all now watching what will happen next and I know that little incidents like this present an opportunity for children to learn and develop their socioemotional skills. One child approaches the sniffling Susan to console her withasmall pat on the back andasympathetic look. I praise them for checking on their friend and being kind. I turn my attention to Sammy and ask if he pushed Susan. He nods reluctantly, not making eye contact. I ask him to look at Susan’s tear-streaked face and how he thinks it makes her feel, happy or sad? Sad, he replies. I ask him whether he likes it when friends push him, how it makes him feel, and if he could please apologize to Susan and give herahug. She accepts both the apology and the hug and I thank Sammy for his apology and for beingagood friend. A minute later they are dancing along happily once again, banging on their little drums and shaking their maracas.
To calm the class down before lunch, we gather them around for story time. They are already shouting out the books they want read and I must remind them to use their indoor voices and sit down quietly so that I can begin to read. I choose their favorite,abook aboutalittle llama who is having trouble going to sleep at bedtime –astory they all seem to be able to relate to.
Now it’s lunch time! Students are encouraged to feed themselves so that they can develop their motor skills and also gainasense of independence. Lunch time also teaches the teachers to be patient, dealing with picky eaters, children who want desert only and runaway children who will dart off if you take your eyes off them. An activity filled morning also means that there are some cranky sleepyheads who are sure to give the TAs some trouble.
After lunch, they wash up, their eyes heavy with sleep. I preemptively turn on soothing lullabies to lull them to sleep. They look like little angels when they fall asleep.
While they sleep, I write reports on the activities of the day and individual observations for each child. Just as I finish the last of my work, the children wake up. They havealittle snack and play with their classmates. After having napped, snacked, and played all day, their parents arrive to find them with big smiles on their faces, ready to go home.
When all the children have left, I put everything in order for the next day. I’m ready to go home, tired but also excited for the next day because there is neveradull day in preschool.
Tags:aday inalife, children, her club, Preschool, Teach, teacher
Wynee Myanmar November 8, 2018